विचार / विश्लेषण के गर्दैछिन् रेडियो नेपालकी यी चर्चित बूढीआमै !
Thursday, 22 Sep, 2016 1:15 PM
रेडियो नेपालको कृषि कार्यक्रममा ‘तपाईंको जेटिए र बुढीआमाको गन्थन’को अन्त्यमा बृद्धा आवाजमा उनी भन्थिन्– ‘हरिशरणम.... !’ कृषि कार्यक्रममा हरिको शरण लिएर जेटिएसँग संवाद गर्ने यी बुढीआमै अहिले पशुपतिनाथ नजिकै कोहि आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेकी छिन् । उनी कसैको आश्रहमा रहेपनि रेडियो नेपालमा बुढ्यौली आवाजमा लक्ष्मी भुसालले भन्ने यही शब्द अहिले पनि अधिकांश किसान सम्झिरहन्छन् । रेडियो नेपालको कृषि कार्यक्रममा कृषिका समस्यावारे प्रश्न राखेर जेटिएसँग गन्थन गर्ने यी बुढीआमै त्यसबेला बुढिआमै थिइनन् । १५ वर्षको उमेरदेखि बुढीआमैको भूमिका निभाएकी उनी अहिले भने वास्तविक जीवनमै बुढीआमा हुन् । किशोरावस्थामा बुढीआमैको आवाज निकालेर उनले भनेको हरिशरणम् अभिनय मात्रै थियो । अचेल उनी ६८ वर्ष पार गरेर वास्तवमै बुढीआमै भएकी छिन् र हरि होइन पशुपतिनाथको शरणमा छिन् । अभिनयमा त उनी १५ वर्षदेखि लगातार ५१ वर्ष बुढीआमै बनिन् तर, वास्तविक बुढ्यौलीले छोएपछि उनलाई कसैले शरण दिएको छैन । ०००
रेडियो नेपालमा साँझ बज्ने कृषि कार्यक्रममा बुढीआमैको भूमिका निभाउने उनै लक्ष्मीलाई भेट्ने कुरा भएपछि उनले पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा बोलाइन् । भेट्न जाँदा उनले आफ्नो बसोवासवारे जिज्ञासा नराख्ने सर्त बाँधेकी थिइन् । बुढीआमैको अभिनयकालको अनुभव बुझ्न जाँदा उनी पशुपतिनाथ नजिकैको जयवागेश्वरी मन्दिरछेउ आड लागेर पर्खी बसेकी थिइन् । ‘तपाईंको जेटिए र बुढीआमाको गन्थन’को अन्त्यमा बृद्धा आवाजमा उनी भन्थिन्– ‘हरिशरणम्.... !’ देख्नासाथ चिनिइन् उनी र नमस्कार गरेँ । रेडियो नेपालबाट देशैभर परिचित आवाजमा उनले बोलाइन् र मन्दिरको बन्द ढोका छेवैमा कुराकानी गर्न थाल्यौं हामी । ‘कहाँ बस्छेस् घरमा को को छन् नसोध्नु है नानी’ रुन्चे अनुहार भए पनि हाँस्दै भनिन् उनले । तर बोल्दै जादा उनी आफैले खोलिन्, गौशाला नजिकै कसैको सहारामा बसेकी रहिछन् । रेडियोमा बोलेपछि घरनिकाला
रेडिायो नेपालको कृषि कार्यक्रममा आवद्ध भएपछि त्यसबेलाको पुरातन समाजको प्रभावमा परेर परिवारले उनलाई घर निकाला गरे । त्यसबेला छोरी भएर दुनियाँले सुन्नेगरी रेडियोमा बोल्नु राम्रो मानिंदैनथ्यो । त्यसैले उनलाई ‘नराम्रो काममा लागेकी’ भनियो । ‘आमा बुबा र दाइ सबैले मलाई नराम्रो काममा लागेकी भन्नु भयो’ उनले त्यसबेलाको घटना सुनाइन्, ‘मैले मेरो काम नराम्रो छैन भनेँ तर, उहाँहरुले सुन्नु भएन, अनि म घरबाट निकालिएँ । काठमाडौंमै घर थियो उनको । तर, घरनिकालामा परेपछि डेरामा बसेर कार्यक्रम चलाउन थालिन् । रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पैसा आउँथ्यो । त्यसपछि उनी लुगा फेरेर लगाउन थालिन् । फेरीफेरी लुगा लगाएको पनि समाजले पचाउँदैनथ्यो । ‘मन लागेका लुगा फेरेर लगाउन समेत समाजको इजाजत चाहिन्थ्यो’ आफूले भोगेको समाजवारे बेलिविस्तार लगाइन् उनले, ‘अहिलेजस्तो हो र ? अहिले त सानो फ्रक र झुत्रा परेको पाइन्ट लगाएर हिडे पनि कसैले केही भन्दैन, पहिले त नयाँ लुगा लगाउँनासाथ कुरा काट्थे ।’ लुगा कहाँबाट किनेर लगाएको भन्ने प्रश्नले घोचेर नै हैरान पाथ्र्याे उनलाई । ‘यत्रो लुगा किन्ने पैसा कहाँबाट आयो भनेर हैरान गर्थे’ उनले भनिन्, ‘एक त महिला मान्छे त्यसमाथि घरनिकाला भएपछि मलाई जिउनु नै ठूलो कुरा थियो ।’ परिवारत्यक्त लक्ष्मीका लागि बिहेवारीका लागि सघाउने कोही थिएन । ‘त्यही संर्घसमा जुझ्दा जुझ्दै मैले त बिवाह पनि गर्न बिर्सिएछु नानी !’
परबाट परित्यक्ता लक्ष्मीले त्यसै कारण बिहे गरिनन् । त्यसबेलाको समाज बिहेवारीका लागि पनि कुल घरानाको ठेगाना पहिले दिनु पथ्र्यो । अहिलेजस्तो बिहे गर्ने केटा र केटीबीच कुरा भएर हुँदैनथ्यो । दुवैतिरका परिवारले सहमति गरेपछि बिहे हुन्थ्यो । तर, परिवारत्यक्त लक्ष्मीका लागि बिहेवारीका लागि सघाउने कोही थिएन । ‘त्यही संर्घसमा जुझ्दा जुझ्दै मैले त बिवाह पनि गर्न बिर्सिएछु नानी !’ उनले आफ्नो जीवनको जटिल मोडबारे सुनाइन्, ‘अहिले सम्झन्छु मलाई घरबाट ननिकालेको भए म अहिले लक्ष्मी भुसाल होइन कसैकी श्रीमती भएर बस्थेँ होला ।’ आफ्नो संघर्षले नै चिनारी दिन सकेकामा भने उनी सन्तुष्ट रहिछन् । ‘न मेरो पहिचान रहन्थ्यो न त आत्मसन्तुष्टि पाउथेँ’ उनले भनिन् । आत्मसन्तुष्टिका लागि उनी अहिले आश्रममै भजनकिर्तन खुव गर्दिरहिछन् । गलामा रुद्राक्ष उनेर बनाइको माला र आङमा रंगहीन कपडा उनको देखिने पहिचान हो । बिहे गरी घरजम बाँधिएको भए कस्ती हुँदिहुन् ? मनमा प्रश्न उठ्यो र सोधेँ लक्ष्मीलाई । उनले जवाफ दिइन्– ‘बिहे गरेको भए म कसैकी श्रीमती पक्कै हुन्थेँ, तर, आफ्नै कामले पहिचान भने बनाउन सक्दिनथेँ । कहिलेकाहीँ यसो बाटोमा निस्कन्छु, मेरो अनुहार मान्छेले चिन्छन् नमस्ते गर्छन्, फोटो खिचाउँछन् । यो मेरो कमाइ हो नि !’ सार्बजनिक गाडीमा चढ्दा कतिपय ठाउँमा उनको भाडा नै लिन मान्दा रहेनछन् र कतिपयले घरमै पुर्याइदिन्छु पनि भन्दा रहेछन् । किशोरावस्थामा बुढीआमैको आवाज निकालेर उनले भनेको हरिशरणम् अभिनय मात्रै थियो । अचेल उनी ६८ वर्ष पार गरेर वास्तवमै बुढीआमै भएकी छिन् र हरि होइन पशुपतिनाथको शरणमा छिन् ।
मकवानपुरका २ गाउँ, जहाँ महिला नागरिकता बनाउँदैनन् बागमतीमा ड्रोनको निगरानी
‘राप्तीपारिको पीडा कसले सुन्ने ?’
दुई राष्ट्रपति पारिवारिक नातामा, शुभकामना दिन पुगे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र